Sida Loo Doorto Muraayadaha Ka Weyn Ee Ugu Wanaagsan Ragga | Niman qurux badan
Qolka Ignatius | | Dhameystirka, fashion
Markaad dooranayso nooc cusub oo muraayado ah, waa inaadan ku salayn naftaada oo kaliya naqshadda aad jeceshahay, laakiin sidoo kale waa muhiim inaad tixgeliso qaabka wajigaaga. The muraayadaha waaweyn ee ragga Uma muuqdaan qof kasta, markaa ka hor intaadan maalgelin (taas oo noqon karta mid muhiim ah) waa inaad raacdaa talada aan ku tusinno maqaalkan.
Rag badan baa, labaduba Waa qasab sida wax aan waxba tarayn, waxay bilaabeen xidhashada muraayadaha. Iyada oo aan loo eegin sababta aad u isticmaalayso, waxa ugu horreeya ee ay tahay in aan xisaabta ku darno waa haddii aan rabno in ay sameeyaan qayb muhiim ah oo ka mid ah shakhsiyadeena ama kaliya dhamaystirka habka labiska.
Dugsiga dhaqanka ee fikirka ayaa soo jeedinaya in kuwan waa in uu ahaado mid caqli badan, isbeddel ay raacaan inta badan dadka lagu qasbay da'da aadka u yar inay isticmaalaan, taas oo ah sababta aan suuqa uga heli karno tiro badan oo noocyo ah oo leh muraayado aan la arki karin, oo leh muraayado furan ...
Dhibka jira, gaar ahaan arrinta ragga, waa taas weli waxaad ahaan doontaa ninka muraayadaha leh. Haddii qaliinka indhuhu aanu ahayn ikhtiyaar, waxa ugu fiican ee aad samayn karto si aad ula qabsato adigoon iska casilin isticmaalka muraayadaha waa inaad isticmaashaa naqshadda ugu habboon qaabka wejiga, qaab ay ku jiraan kala duwanaansho suurtagal ah oo ku xiran nooca gadhka. in aanu xidhno
Laakiin, marka lagu daro, waa inaan sidoo kale xisaabta ku darnaa midabka jir si ay u noqdaan qayb ka mid ah aqoonsigeenna muuqaal iyo qof ahaan, laakiin marnaba ma qeexin qaabkayaga.
Laguma talinayo inaad isticmaasho midabyo kala duwan oo muraayadaha muraayadaha ah iyadoo ku xiran midabka dharka aan isticmaalno, gaar ahaan haddii ay tahay midabyo dhalaalaya, maadaama aad maamusho khatarta ah inaad noqoto goob socdaal.
1 Muraayadaha iyo qaabka wejiga
1.1 Muraayadaha loogu talagalay wejiga wareegsan
1.2 Muraayadaha loogu talagalay waji labajibbaaran
1.3 Muraayadaha wajiga oval
1.4 Muraayadaha wejiga u qaabaysan wadnaha
3 Doorashada midabka ugu fiican ee muraayadaha
4 Muraayadaha waaweyn ee ugu fiican ragga
Muraayadaha iyo qaabka wejiga
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan ku xisaabtano markaan dooraneyno hal nooc ama muraayad kale waa inaan ogaano Duur noocee ah ayaa ugu habboon wajigeena? sida uu u qaabaysan yahay. Haddii aad leedahay weji jilicsan oo leh sifooyin qalloocan, doorashada ugu fiican ayaa ah inaad ka hortagto xaglahaas muraayadaha tooska ah. Taas bedelkeeda, haddii aad leedahay weji aad u xaglo leh, doorashada ugu fiican waa inaad isticmaasho muraayadaha wareegsan.
Muraayadaha loogu talagalay wejiga wareegsan
Waxaan tixgelineynaa wejiga wareegsan marka ballaca iyo dhererka dhabannada iyo garka ay isku mid yihiin. Isticmaalka muraayadaha leydi-geeska ah, waxaan ka dhigi doonaa wejigayaga eeg caato ah oo dheer.
Intaa waxaa dheer, buurtu waa inay noqotaa dhuuban intii suurtogal ah.
Muraayadaha loogu talagalay waji labajibbaaran
Habka ugu fiican ka jar qaababka xagal wejiga waa adigoo isticmaalaya muraayado leh muraayado wareegsan. Tixgelinta waji labajibbaaran waxay la mid tahay wejiga wareegsan, oo dhabannada iyo garka ay isku ballac yihiin.
Framasyadu waa inay fiican yihiin, mar haddii kuwa qaro weyni ay wejigeenna ka badin doonaan, iyagoo hoos u dhigaya muuqaalkeenna.
Muraayadaha wajiga oval
Sida indhaha brown, waa tonic guud ee gudaha dadka intooda badan, si la mid ah waxay ku dhacdaa wejiga oval. Noocan wejiga ah ayaa la qabsada badi noocyada muraayadaha, si aan u isticmaali karno muraayadaha tooska ah iyo kuwa wareegsan labadaba.
Haddii aan isticmaalno muraayado dhumuc weyn leh, waan awoodnaa wax yar oo qeexitaan ah ku darso wajigeena.
Muraayadaha wejiga u qaabaysan wadnaha
Wajiyo dhabanno dhuuban leh iyo gadh yar waa a xanuunka doorashada nooca saxda ah ee muraayadaha, maadaama ay ka qaadi karaan muhiimada garka fiiqan, kordhinta ballaca qaybta sare ee wejiga haddii aan isticmaalno muraayado waaweyn.
Waxay ku xiran tahay dhadhankayaga iyo dhaqaalaheenna labadaba, Markaad dooranayso alaabta wax soo saarka ee muraayadahayaga, waxaanu haysanaa qalabyo kala duwan oo noo yaal.
Caagagga lagu daro naylon ayaa caadi ahaan loo isticmaalaa muraayadaha leh midabyo dhalaalaya oo muuqda, Waxay leeyihiin a adkeysiga cadaalad ah oo sarreeya waxayna ku fiican yihiin haddii aad raadinayso inaad soo jiidato dareenka deegaankaaga asxaabta, laakiin kuma habboona goobta shaqada.
Muraayadaha lagu sameeyay zylonite waxaa laga heli karaa ficil ahaan midab kasta waxaana inta badan loo isticmaalaa muraayadaha ciyaaraha. Marka lagu daro naylon, way ka dabacsan yihiin kuwa lagu sameeyay bacaha iyo naylon kaliya.
Haddii aad rabto in aad illowdo miisaankaaga iyo in muraayadahaaga wejigaaga ka lun, Waxaan isticmaali karnaa titanium, walxo aad loo jecel yahay oo ay uga mahadcelinayaan iftiinka iyo dabacsanaanta, inkastoo ay ka qaalisan yihiin moodooyinka intiisa kale.
Haddii aad raadinayso faa'iidooyin isku mid ah oo ay bixiyaan muraayadaha titanium, laakiin miisaaniyadaada ayaa ka sii adag, waxaad dooran kartaa kuwa aluminium, inkastoo aysan aad u adkeysi lahayn.
Markaad dooranayso muraayadaha birta ah, waa inaan maskaxda ku haynaa taas qaarkood waxaa ka mid ah nikkel, walxo dadka qaarkiis ay ku keeni karaan falcelinta maqaarka.
Doorashada midabka ugu fiican ee muraayadaha
Haddii aan lacag noo hadhin oo aan iibsan karno muraayadaha midabada kala duwan, waa inaan si taxadar leh u dooro midabka muraayadaha muraayadahayaga, ilaa inta aan ka haysano baahida loo qabo in aan isticmaalno labadaba waqtiyada firaaqada iyo goobta shaqada.
Haddii aan ka hadalno jawi shaqo oo suudhka iyo tiigu ay u badan yihiin, waa in aan dooranaa ikhtiyaarka dhaqanka midabada macdan aasaasiga ah dahab, qalin ama madow. Haddii aad doorato muraayado caag ah, qaro weyn ama midab dhalaalaya leh, muraayadahaagu waxay soo jiidan doonaan dareen ka badan kan qofkaaga.
Haddii lid ku ah, uma baahnid inaad xidhato suudh, fursadaha marka lagu daro midabada si weyn loo ballaariyey. Intaa waxaa dheer, waxaad ku dari kartaa nooc kasta oo faahfaahsan ama qurxinta iyaga.
Muraayadaha waaweyn ee ugu fiican ragga
Sida aan ku sheegay bilawga maqaalkan, marka la dooranayo muraayadaha waaweyn ee ragga, waa inaan xisaabta ku darnaa dhammaan tixgelinta aan ku sharraxay maqaalkan, inta aad rabto in muraayaduhu ay noqdaan qayb ka mid ah adiga oo aan ahayn qaybta ugu soo jiidashada badan ee qofkaaga.
Marka aad si cad u qeexdo dhammaan dhinacyadan, wakhtigu waa la gaadhay u tag dhakhtarka indhaha halkaas oo, iyadoo lagu saleynayo kala duwanaanshaha qiimaha aad qorsheyneyso inaad maalgashato, dooro qaabka ugu habboon qaabka wajigaaga, dhadhankaaga iyo baahiyahaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Sida loo doorto muraayadaha ugu fiican ee ragga